Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Arbaco Ah | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Arbaco Ah
Hadaba waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee ay qoreen wargeysyada Yurub
Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa ka fiirsanaya inuu sannad fasax ka qaato kubada cagta dhamaadka xilli ciyaareedka danbe haddii uu ku guuleysto Champions League. (Daily Star)
Manchester United ayaa xiriir kala sameysay Barcelona saxiixa xiddiga khadka dhexe ee Croatia 31 sanno iirka Ivan Rakitic. ( Sport)
United waa inay labo jeer jabiyaan rikoorkooda suuqa kala iibsiga ee daafac haddii ay doonayaan labada xiddig ee England Aaron Wan-Bissaka oo 21 jir ah una ciyaara Crystal Palace iyo Hary Maguire oo 26 sanno jir ah oo u ciyaara Leicester City, waxaana saxiixa labada daafac uga bixi doonta 130 milyan ginni. (Standard)
United ayaa sidoo kale xiiseyneysa daafaca Ingariiska ee kooxda Norwich City 19 jirka Max Aarons haddii ay ku guuldareystaan saxiixa Wan-Bissaka. (Sky Sports)
Daafaca kooxda Ajax 19 jirka Matthijs de Ligt ayaa sheegay inuusan ogeyn halka uu qalbigiisa yaalo balse uu go’aan ka gaari doono mustaqbalkiisa inta uu fasaxa ku maqan yahay. (Mundo Deportivo)
La taliyayaasha De Ligt ayaa u sheegay ciyaaryahanka inuu ku biiro koox sida Manchester United oo kale ah halkaasoo uu boos joogta ah ka helayo ka hor inta uusan xilli danbe waayihiisa ciyaareed u wareegin Barcelona. (Sport)
Chelsea ayaa dooneysa inuu diyaar u yahay tababarahooda cusub ka hor inta aysan tababare Maurizio Sarri u fasixin inuu ku biiro Juventus dhamaadka isbuucaan. (Daily Mirror)
Sarri ayaa sidoo kale loogu baaqay inuu ka fiirsado mustaqbalkiisa iyadoo madaxda Chelsea ay weli doonayaan inuu kooxda sii joogo. (The Sun)
Chelsea ayaa wadahadal la furtay tababaraha kooxda Derby Frank Lampard iyagoo doonaya inuu xiddigii hore ee kooxda uu ku laabto Stamford Bridge. (Daily Mail)
Xiddiga garabka ka ciyaara ee Chelsea Callum Hudson -Odoi oo 18 sanno jir ah ayaa doonaya in loo balanqaado inuu boos joogta ah ka helayo kooxda ka hor inta uusan qandaraas cusub u saxiixin kooxda. (The Sun)
Real Madrid ayaa sameyn doonta wax walba oo ay awoodaan si ay u la soo wareegaan xiddiga khadka dhexe ee Manchester United 26 jirka Paul Pogba, iyadoo tababare Zinedine Zidane uu ka dhigtay dooqiisa koowaad. ( Marca)
Arsenal ayaa xiiseyneysa xiddiga khadka dhexe ee Roma Lorenzo Pellegrini kaasoo qandaraaskiisa kooxda Talyaaniga lagu burburin karo 27 milyan ginni, laakiin waxay tartan kala kulmayaan Tottenham, AC Milan iyo Inter Milan oo xiiseynaya 22 jirkaan. (Daily Mirror)
Goolhayihii hore ee Italy Gigi Buffon oo 41 sanno jir ah ayaa ku biiri kara FC Porto ka dib markii uu ka tagay PSG, Si uu u bedelo Iker Casillas oo 38 sanno jir ah. (Tuttosport)
Manchester United ayaa ka fiirsaneysa inay qandaraas cusub u soo bandhigto goolhaye David de Gea oo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga danbe islamarkaana ay ku soo celiso miiska wadahadalka. (Telegraph)
United ayaa la soo wareegi doonta goolhayaha reer Cameroon ee reer Ajax Andre Onana oo 23 sanno jir ah haddii De Gea uu baxo xagaagan. (Independent)
Madaxa Man United Ed Woodward ayaa sii maamuli doona suuqa kala iibsiga kooxda madaama aan la fileynin in la magacaabo agaasime isboorti ama agaasime farsamo xagaagan. (Daily Mail)
Barcelona ayaa rajeyneysa inay ugu yaraan 60 milyan euro ka soo gasho iska iibinta ciyaartoyda ka hor 30ka bishaan Juun si ay isagu dheelitiraan buugooda xisaabta ee xilli ciyaareedkii dhamaaday ee 2018-19. (ESPN)
man umited waa ineysidhaqsa ah ay lasoo saxiixatto bissaka
Mxa wararka liverpool awi
Axmed Jr10 says:
Hadday man united labada daafac hesho waxay ubuuxinayan boosaski ay baneyeen labadi halyey ee Rio Ferdinand iyo Nemanja vidic